COVID-19 Somaaliga – Somali
MA TIHID KALIGA.
WAKHTIGAN LAGU JIRO XUQUUQAHA MIDOWGA
EE COVID-19 IYO SHAAQO KA FADHISIGA
Waxyeelada COVID-19 (ama Karoona Faayres) Waa Dhibaato Aynaan Hoorey usoo mariin Bulsho ahaan muudo dheer. Siiyabo kala duwaanbu u Dhaawacaya Qoys kasta, iyo goobaha shaqada. Laakin si mideysan ayaan u wada Wajahayna.
1) Waa maxay Xuquqahaygu haddii Goobtan ka shaqeeyo laagooyo Saacadaha?
Heeshiskaga Miidowgu wuxu difacaya sinyooritigaga. Mudadan Lagu guda jiro qalalaska fayraskaan COVID-19, Haddi Macmilku yareeyo adeegyada, Guudahanba Shirkaduhu waa ineey sameeyan shaqo kafadhisin siidi looso kala horeeyay, taaso ku saleeysan qoodobkasto uu heeshisku u dhigayo.
Waxaad Ku Jiraaysa Diwaanka shaqo ka fadhisinta ilaa goortay shaqaaluhu kusu laabtan heerarki hore. Qiwaaniin Gaar ah oo kuusabsan ku soo laabashada shaqda ayaa laga yaaba inay ku kala duwantahay heshiis kasta, Laakin Mowqafka uruurka midowga ayaa ah waa in lagu siya booskagi hoore ee shaaqo iyo islaa goobtad kashaqyen jirtay marki la heli karaba, sababtooy tahay taani maha shaqo ka fadhisin joogta ah ee waa hoos udhiigis shaqo oo ku meel gaadh ah fayraskaan dartii.
Miidowgu Shirkad kasta wuxu u diray warqado uu kaga codsanayo macluumaad iyo kuulanti haddi wax isbadali ku yimaado habka shaqalaha. Waxaan so gudbin dona dhamaan Akhbaaraha ku habon xubnaha markii aay naso gadhan.
Haddi aad Maqasho goobtaad ka shaqayso wayxidhmaysaa ama Saacadaha la jaraya, FADLAN SOOWAC XARUUNTA MACLUUMADKA EE XUBNAHA: 855-265-6225.
2) Sideen ku heli kara caawimad haadi shaqada layga fadhiisiyo?
Codso Caymiska shaqo la’aanta ee loyaqan unemployment haddi aad tahay Shaqaale ku waxyeelobey shaqo ka fadhisinta u sababay COVID-19, Sii degdeg ahna u codso dheefaha Caymiska shaqo la’aanta. Guudomiye Walz wuxu hakiyeey muudadi dheerayd ee manafacadka lasuugi jiray, taaso shaqalaha uu ogolatay ineey kuhelan manafacadka sii degdeg ah.
Haddi an shaqada laga fadhisiinin, laakin saacadahagi yaraaden, ama hadaadan sii shaqyen Karin sababto ah waa inaad guriga jogto si aad udaryeshid uubadka madaamo la xiidhay iskuulada, waad uqalmi karta dheefaha shaqo la’aanta ah, waana inaad dalbata.
Sii aad u codsaato macluumadkan boqo Khadka tooska ah shabaakada shaqo la’aanta ee minnesodha www.uimn.org 651-296-3644
Waxaa jira caawimaad badan/macluumad kale o logutalagalay shaqalaha ubahan cuunto, iwm waqtiyadan adag boqo:
Cuunto bilalacaga o logu talagalay ardayda fasalka K-12 ee ku nool Twin Cities http://bit.ly/FreeK12lunch
Khadka tooska ah ee Xafiska cafimadka minisodha: 651-201-3920
3) Maxaa Dhacaya Haddi La I weydiiyo inaan ku shaqeyo xaalado aan aamin aheyn?
Haddi lagu weydiyo inaad ka shaqayso haawl naftada khatar galineysa, Shaqadaas waad diidi karta, waana inaad sii degdeg ah ulaaso xiidhidha xarunta macluumadka ee xubnaha: 855-265-6225.
Waa inaad kaliya isticmaasha kiimikooyinka lagu tababaray in sida badbaadada leh lo isticmaalo, Markaa haddi shirkadu uu bahantahay inaad isticmaasho kiimikoyin aadan hoory uu isticmalin intaa mudadan lagu jiro, waxad xaaq uledahay inaad ku adkeysato in tababar marka hore lagu siiyo.
Ka eeg shabakadan intarnetka: ilaalinta shaqaalaha inta lagu guuda jiro mushkiladahan faafa www.osha.gov/Publications/OSHAFS-3747.pdf
4) Sideen uu Adeegsan karna Awoodaha midowga sii an nafsadena ugu ilaalino?
Xubnaha Local 26 aya ku biiraya ururada kale ee bulshada sii ay uu baraarujiyan mulkilayasha dhismaha iyo siyaasiyiinta iyaago ku dardar galinaya in ayanan kaliya shaqaluhu ku waaxyelobiin mushkiladahan dilaacay ee karoona fayras. Waxaan siddo kale codsanayna in la kordhiyo dheefaha shaqo la’aanta, joojin ku sabsna ka saaritanka ama diib-umarinada inta lagu jiiro mushkiladahan dilacay, iyo waliba codsiyo kale o nacawinaya si an uga baxno wakhtiyadan adag. Iyaado fahfahsan booqo shabakada, https://www.mncovidresponse.com/
Waxaan diyaarin doona digniinta ficilada xubnaha iyo habka an gacan uga geysan karno badbadada shawalaha iyo waliiba caawimado dheeri ah.
Ha Cabsan. Is ilaali. Isku duubnaanteenu waa awood adag.
Nagalaso xidhidh xubnaha macluumadka ururka 855-265-6225. Booqo Shabakadeena
sii aad uheesho wararki ugudanbeyay www.seiu26.org on Facebook at www.facebook.com/seiu26 and on the web.